Hotel Projects International - Armati Fundisa njani ukuba Faka i-Anti-umphunga Valve
NgoLwesihlanu, Meyi 5, 2017 3: 15: 32 AM America / Los_Angeles
Ngaba wakha emi imvula, kodwa ukuze zitshile ngamanzi super ashushu (okanye ebandayo super) xa umntu kwenye endlwini egungxula yangasese okanye abaleke amanzi? Ukufakela kwivelufa anti-umphunga egeza uza kuphelisa ezi izinto ezi- ebanga kwaye iyingozi.
valve Anti-umphunga, okwabizwa ngokuba semigudu uxinzelelo-balance, ukubuyisela utshintsho uxinzelelo ngesiquphe kuzo zombini imigca emanzini ashushu nabandayo. Oku ke kuthintela le lobushushu ekuguquleni ukuphendula kwamanye amanzi sisondela. Ekubeni utshintsho lobushushu ngesiquphe kunokubangela umntu uhlamba kwishawa ukuba utsibe okanye ngenye agxadazele wakhe, ukugcina iqondo nokuba kungavimbela kumaphetshana awe. Kungenza ukuba abilayo ukonzakala - ". Anti-umphunga vana" Ngenxa yoko igama,
Vala yaManzi bathathe imilinganiselo
Ukuze makafakele isivalo anti-umphunga, inyathelo lokuqala ukucima unikezelo lwamanzi imvula uya kusebenza kuyo.
Emva koko ukususa isiphatho langoku escutcheon ipleyiti (ukuba ipleyiti yesinyithi ehamba emva amanye amanzi ephatha ngayo imvula). Linganisa ukucuthwa evela ngaphandle ithayile ukuya embindini mibhobho eludongeni. Le yenye ixesha awufuni ukuthenga inxalenye entsha yokuqala. Kungenxa yokuba ufuna kwivelufa anti-umphunga ukuba unalo nesimo esifanayo ukuba ufakelo lula.
Susa Plumbing Old
Inyathelo elilandelayo kokufaka vana yakho entsha anti-umphunga kukuba ukufumana emva ivelufa, ukusuka kwelinye icala eludongeni. Ukuba akukho sele kukho umngxuma ufikelelo, kuza kufuneka ukuba itshone elinye. Emva kokuba ukufikelela, susa Senga umgqomo kunye neshawari ingalo. Sika imigca unikezelo apho aya khona kwemithambo shutoff. Susa faucet ivalve endala kunye igiza endala ngaphezu kokuba wenze apho cut.
Sebenzisa ivalve endala kunye nemibhobho njenge template yokuqingqa ubungakanani ivelufa ibandla elitsha anti-okanye umphunga. uqhagamshelo Solder, esebenzisa ilaphu engangenwa ukugcina ukusuka ekhanyisa ndawo umsebenzi ngomlilo. Ngoxa ngelotha, vula kwemithambo shutoff uze ususe iCartridge vana. Khusela ivalve kunye nemibhobho ngeebloko inkxaso nogwali iirholithi.
Faka i Plumbing Entsha Vavanya i Anti-umphunga Valve
Buyela kwicala imvula (ngaphambili). Ngoku faka kwipleyiti escutcheon entsha, wabeka limiter anti-umphunga, uze ufake isiphatho omtsha. Faka Senga umgqomo kunye nengalo kwiishawara. Vavanya ivalve anti-umphunga kunye unxulumano.
Ukulungisa ivalve anti-umphunga, khangela kume ojikelezayo nezixhobo-ezifana emva emphinini. Le stop ulawula eshushu nga wawaguqulayo amanzi. Bonke kufuneka uyenze ukuze kule nxalenye yi ukususa isiphatho - akukho mfuneko sokunciphisa eludongeni. Oku kwenza kube ngobulungisa lula ukuphinda-lungisa xa ufumanisa ukuba abanelisekanga yindlela ngayo ukuba ekuqaleni kumisa.
Xa la manyathelo nigqibelele, wakugqiba ukufaka ivalve anti-okanye umphunga. Ngoku uya kuvuyiswa uthatha ishawa, nisazi ukuba akuyi ezitshileyo emanzini kakhulu eshushu okanye ebandayo xa umntu ubaleka amanzi kwenye endlwini.